Vaovao - Fa maninona no foana ny firavakao Voahangy?
Fa maninona no foana ny firavakao Voahangy?
Nisy vaovao iray navoaka momba ny tranga ahiana ho vidin'ny perla ao amin'ny foibem-panadinana firavaka: nandany vola mitentina USD1 50000 Andriamatoa Chou hividianana rojo voahangy iray rano ho an'ny vadiny, saingy vao vita ny fahavaratra iray, ilay rojo perla izay matetika no ampiasain'ny vadiny nihena efa ho 1.5mm, ary nanjary tsy mitovy ny velarana.
Niahiahy Andriamatoa Chou fa nividy sandoka izy, ka nentiny tany amin'ny foibem-panadinana ilay rojo perla mba hahalalana azy. Saingy nihoatra ny nantenainy ny vokany. Ny valin'ny fanombanana dia naneho fa tena izy ilay perla. Ny antony mahatonga ny perla hihena ary nanjary tsy mitovy dia noho ny fitafiana diso sy ny harafesin'ny asidra.
Ny singa mineraly lehibe indrindra izay mahaforona perla dia ny Aragonite sy Calcite (manodidina ny 82% -86%), ary koa ny keratinina perla 10% -14% ary ny hamandoana 2%. Ny mineraly roa mandrafitra ny perla dia calcium carbonate (CaCO3), ny gravité aragonite manokana dia 2.95, ny hamafiny dia 3.5-4.0, ny gravité manokana an'ny calite dia 2,71, ary ny hamafiny dia 3, ka marefo be ilay perla.
Satria ny singa lehibe indrindra amin'ny perla dia ny calcium carbonate, rehefa mifandray amin'ny zavatra misy asidra (toy ny hatsembohana, rano avy amin'ny paompy sns) ny perla, dia ho simba ny velarana. Satria tsy avo ny hamafiny, ny fikororohana zavatra sarotra sasany koa dia hiteraka fahasimbana amin'ireo perla.
Ho fanampin'izay, rehefa mifandray amin'ny loharanom-pahavaratra na loharano mirehitra ny perla, dia ho mainaina tsikelikely izy, very tsikelikely ny hamandoana, ary ny Aragonite dia hovaina ho lasa kalite, ka mahatonga ny perla ho very tsikelikely ny famirapiratany.
Raha mpitia firavaka ianao ary matetika mividy firavaka perla, dia ho fantatrao fa mila havaozina ny firavaka ary soloina amin'ny fotoana mahazatra mahazatra ny firavaka.
Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Aaa Voahangy Rano, Kavina fampakaram-bady, Kavina Stud Perla, Voahangy marina anaty rano velona,